Dhammaan Waxaad u Baahan Tahay Inaad Ogaato ku saabsan iCloud
U bood markabka si ay Android laakiin tago taariikhda iCloud? Haddii aadan haysan in. Maqaalkani waxa uu ku tusayaa sida aad u hagaagsan iCloud Calendar on Android qalab si fudud. Read More >>
Kala beddelashada music ka iCloud in Android waa mid aad u fudud oo isticmaalaya MobileTrans. Si aad u bilaabaan, uu raaci doonaa habraaca fudud Read More >>
Haddii aad raadinayso siyaabo by kaas oo waxaad dhaaftaan kartaa qufulka hawshooda u iCloud, waxaannu wadaagi doonaa faahfaahin muhiim ah oo ku saabsan la mid ah. Mararka qaarkood, waxa dhici kartaa in ay sidaas waxaad ka heli doontaa baahida loo qabo in bypa Read More >>
Tilmaan-bixiyahan waxa aad muujinaysaa laba siyaabood in ay tirtirto sawiro ka iCloud. Waxaad dooran kartaa mid ka mid iyaga ka mid ah in la tirtiro sawirrada aan loo baahnayn ka iCloud. Read More >>
Maqaalkani waxa uu inta badan ku tusaysaa sida ay u dhoofiyaan xiriirada iCloud in Outlook aan ku xirid ah. Akhri maqaalkan oo isku day inaad naftaada. Read More >>
iCloud kuu ogolaanayaa inaad si loo soo celiyo aad iPhone, iPad, iPod iyo taabashada ka faylasha ay gurmad. Raac tallaabooyinka ku cad qodobkan si ay u bartaan sida loo soo celin iPhone, iPad, iPod oo ka gurmad iCloud. Read More >>
inay u dhoofiyaan oo dhan ama soo xulay xiriirada badbaadiyey on xusuustaada iPhone ee, iCloud, Exchange iyo xisaab oo dheeraad ah si file CSV ah, furo CSV ee tafatirka ama daabacaadda ... Read More >>
Waxaa markii hore ayaa sidoo kale loogu tala galay si aad dhaqaajiso kartaa iPhone ama iPad aan gargaar ka mid ah computer ah. Iyada oo taageero ka iCloud hadda aad si fudud u noqon kartaa qalab aad, gasho oo aad Apple ID Read More >>
ICloud Photo Sharing yimid dhisay iPod kasta, iPad ama iPhone oo macruufka 7 ama macruufka 8 ilaa taariikhda. Read More >>
Hoos waxaa ku qoran shuruudaha 8Oo hogaanka hufnaan. Qalabka si aad u wanaagsan u shaqeeyaan si ay u caawiyaan oo waxaad dhaaftaan iCloud. Bal aynu eegno mid kasta si gaar ah. Read More >>
Iyada oo la sii daayo mid iCloud uma baahna in ay sii waraaqihiisa in uu laptop ama folder computer iyo files. Read More >>
iCloud waa ururinta dib-u-taariikhda adeegyada Kombuyuutarada daruur Apple ee. Waxaad wadaagi karaan wax adeegga u dhexeeya ah iPhone, iPod, iPad iyo Mac. Macluumaadka ku jira qalabka oo dhan waa automatica Read More >>
Haddii aad xoojiyaa aad xiriirada si iCloud, ka dibna marka aad u baahan tahay, in aad leedahay qabashooyin ah 4 fursadaha dib u soo ceshano xiriirada ka iCloud. Read More >>